Dhaamasa Atatama Uumata Oromoo hundaf !!!
Gaafiin Oromoo Gaafii Abbaa biyyumati gaafi Bilisumaati !!!
Oromoo Hirira Mootumma kana mormuu gegesa jira. Garuu Mootumman kun Gafii uumataaf deebi keenee badi ga'eef kassa kafaluu irra Tarkanfi Mootumman fudhatee siirdha, gara fula durati mootumman tarkanf wal fakata akka fudhatu jeechuun OPDOn hirira qoophessa jirti. Kun uumata tufachuu dha.
Haaluma kana Guyyaa borii Jan 11, 2015 gandoota oromiyaa hedduu keesratti wayyaaneen hiriira qopheessaa jirti innis hiriira guutummaa oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana balaalleffachuu kan jedhuu dha. kanaaf opdon akka ollaa,firaa fi maatii keenya goyyomsisee ykn sodaachiftee hiriira kana ummata akka hin yaafneef dirqama fudhannee karaa nuuf danda'ame bilbilaanis ta'e qaamaan akka waliif dhaaman gochuu. Hiirira OPDO kana gara Hirira uumataa jijiruu OPDO ganda fi Annalee hunda keessa ari'achu, yoo kana hin dadeenye amoo Oromoo hundi Mana cuufete OPDO diidun mormii isaa argisudha,
TPLF/OPDO lubu 150, Ajeesee, 3, 000 madeese 10, 000 mana hidhati erga naqee booda, Qabsoon uumataa kun shorirkessadha jeechun mootuman kun Uumataa akka tufatee fi nagga fi arara uumata irra kan hin qabne ta'uu isaa hunbachuu qabna. Erga mootuman Arara dhisee humana falatee Oromoo ilee Qabsoo isaa daranu gara humana jijirun tarkanfii dandayee hunda fudhachuu qaba,
Erga keenya in bu’uura amoo kan kana gadii ta’aa.
Qeeroon Oromoo fi uumanii Oromoo qabsoo jaabeese itti fufu qaba.
FDG fi qabsoon Bilisummaa Uuanii keenya gegesaa jiruu cimee itti fufuu qaba. Qabsoon kun dhaabanan Oromoo kana caalaa funanamee hidhama. OPDOn qabsoo uumataan kabajamtee jirtuu kun ilee yoo soochiin kun qabna’ee ABYI TSAHAYE akkuma jeedha isaan funanee “daalaa sawwa keessati OPDO milliona 4 hidhuuf qoophi qaba” Tigiren da’iima wagga 7 bombin rukutuu yoo qabsoon kun qabana'ee caalaa Oromooti roorfitii. Kanaafu qabsoon kun cimee itii fufu qaba sababin isaa:-
1. Maaster Pilaani ama ilee akka itti fufu Abayi Tsahaye Gondor irrati Mudee 31 waan labseef, kana irra iyuu darbee Xababoochin like insgabachewalen jeecha waan jiruuf
2. Abayi Tsahaye Oromoo xiqeeesuu fi tufachuu itti fufun isaa Tigiren Oromoo samitee baduuf qoopha’uu ishee argisisa. Fakeenyaf jeechi isaa "Likiitii isiin galchiina", "Dala Saawwa keessati OPDO hina", ykn "OPDOn hundi ishee iyuu saawwa," Badi hanga amati goodhamee hunda OPDOtu fudhata jeechun isaa Tigiren badii tokko ilee akka hin qabne ibisun isaa ama ilee nu siirdha jeechuu isaati. wayee lubu 150 bade hirnfateera.
3. Getachew Rada Uumataa Oromoo Milliona 50" የኦሮሞ ህዝብ "አጋንኔት"፣ "አሸባሪ"፣ "ጋኔል"፣ "ጋንግስተር"፣ "ጠንቋይ"፣ ነው።" akkasti Harabsee angoo irra turun isaa Oromoo akka hin jireti lakuu Tigireti.
4. Namoota du’aan 150 TPLF wayyanen du’aa isaan ilee beekamti dhorkatee fakeenyaf:-
a. Nami 140 du’uu dhabilee mirga dhala nama adunya kan gabasan yamuu ta’uu qabataman garuu nama 150 ol akka ta’uu itlmama.
b. Dubartiin Ulfa ji’a 7 ajeefamte gatamun yakka wayyane fi garajabina Tigire mulisa,
c. Mucaan umuri waga 7 mana barumsa keessati Bombi wayyane itti darbamun goocha wayyane caalti mulisa,
d. Nama fayya awaliinun isaan qabataman raggan ifa ba’ee jira.
e. Baratoo Oromoo namoonta birra ajeesan bishan fi bosonati gatuun yakka duguga santyii mulisa
f. Shamaran university kampasi keessati dirqisisan gudeedun yakka olanadha
g. Bakka hundati namoota hirira ba’aan irrati bombi dhoksun
h. Suuqi dalaltoota waraana samisisuu, qee’ee qoonan bula abidan gubuu
5. Heera fi Seera federala cabsuun Oromiyya gutuman gututi waraana jalati akka bulituu goochuu isaan.
6. Oromiyan mirga ama isheeti fi caasa ittin mootummaa wal qunamtu utuu qabduu namichi Abayi Tsahaye jeedhamuu akka barbadeeti seeran ala itti ajeejun.
Kun hundi kan argisisuu TPLF Tigirayi uumani Oromoo akka namati utuu hin tanee sadarka Horii ykn qabeenya isaan ilaalun isaanit. Kanaafuu Oromoon tufee isaan basuu goodhee jira. Qabsoo Ummataa kun jabatee itti fufun siira abba hiree kana buqifne abbaa biyuuma Oromoo fi Oromiyaa mirkanesuu qoofa. Qabsoo Oromoo Qeeroon fi baratoon Oromoo guyya guyyan dhigga itti lolasa jiran, butani Habasha jala galchuuf kan folatan dhabachuu qabu. Yakka Goobana, Habte G/Georgis (Abbamala) dalagee, dogogora gaafa Hailesilasen kufee hayuulen Oromo dalgan fi Gaafa Dargiin kufee dogogri dhalatee ama ilee dogogra wal fakata hojeechuuf wixifachuu irra of qusachuu qabu. Isaa tokko itti du'eeti nama afeerun safuu Oromoo cabsuu fi qaniidha. Oromoo Qabsoo isaa egalee bakka, ga’uu qaba. Gaafiin Oromoo Oromoo abba biyya goochuu dha.